တို့လယ်တော – Achit University
“တို့လယ်တော….” “မောင်ညို…..ဟေ့ မောင်ညို…” “ဗျာ….အစ်မ. လာပြီး” “အေး….လယ်ထဲမှာ မျိုးစပါးခင်း သွားစောင့်ချေဟယ် ” “အင်း…အစ်မ ကျနော် ထမင်းဘူးပါ ယူသွားရမလား” “အေးလေဟယ် နင်တစ်နေကုန် နေရမှာ နွားသိမ်းချိန်ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့နော်” အစ်မအေး ထုပ်ပေးတဲ့ ထမင်းဘူးနဲ့ တုပ်တစ်ချောင်းကိုင်ပြီး လယ်ထဲက တဲကို သွားရမှာ ရင်ထဲမှာ ပျော်မဆုံးပေါ့ဗျာ။
မပျော်ဘဲ ရှိမလားဗျ မျိုးခင်းစောင့်ရင်း ကိုကြီးဖိုးထူး နဲ့ ဖင်ခံရတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ….. “ဟေ့…မောင်ညို… မင်းရောက်လာပြီးလား…” ပြုံးစစမေးလိုက်တဲ့ ကိုကြီးဖိုးထူး အကြည့်တွေက လူကို ဝါးမျိုးတော့မတက် စူးစူးဝါးဝါး နိုင်လှတယ်။ “ကိုကြီးဖိုးထူး.. ကျနော် တဲထဲသွားတော့မယ် ” “ဟား….ဟား…ငါ လဲ လိုက်မှာပေါ့ကွာ…”
ကသင်းရိုး ပေါက်လက်စကို ရပ်ပြီး ပေါက်တူးလေး ထမ်းပြီး အနောက်ကနေ လိုက်လာတဲ့ ကိုကြီးဖိုးထူး ပေါင်ခွကြားက ထိုးထိုးထောင်ထောင် နဲ့ တရမ်းရမ်း လမ်းလျှောက်တိုင်း လှုပ်ခါနေတာ အာခေါင်တွေပါ ခြောက်လာတယ်…. ပြွတ်..ပြွတ်…..အင်း……. “အာ….ကိုကြီးဖိုးထူး ကလဲ ထိုင်ပါရစေဦး.. ရောက်တာနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတာကြီးဘဲ..” တဲပေါ်ရောက်တာနဲ့ နုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရ နမ်းနေတဲ့ ကိုကြီးဖိုးထူး ကို မူနွဲ့နွဲ့လေး ဆိုလိုက်တော့…. “မောင်ညို….မင်းဖင်လေးက အရမ်းလိုးကောင်းတာဘဲကွာ ငါ မနက် အစောကြီးထဲက မင်းမလာကို မျှော်နေတာ ”
“အင်းပါ…တစ်နေလုံး အကြိုက်လိုး လို့ရတယ် ” “မရဘူးဟ…ငါ ညနေ ဟိုဘက်လယ် သွားရမယ် ကြာတယ်ကွာ…လုပ်စို့” လက်ကောက်ဝတ်လောက်ရှိတဲ့ ကိုကြီးဖိုးထူး ရဲ့ လီးကြီးကို ပါးစပ်နဲ့ မဆန့်မပြဲ စုပ်ပေးနေတဲ့ ကျနော် ခရေကို တံတွေစွတ်ပြီး လက်နဲ့ ထိုးစွပေးလိုက် နိုးသီးခေါင်းလေးကို ချေပေးလိုက်နဲ့ အို…..ကောင်းလိုက်တာဗျာ…. ပြွတ်…ပြွတ်….အဟွတ်…အဟွတ်…. အား…ရှိး….ကောင်းတာကွာ…. အွန့်…..အွန့်…..အ…..အ…ဖွီး…. အဟွတ်…..အဟွတ်….. အာခေါင်ကို စောင့်လိုးထဲလိုက်တဲ့ လီးကြီးရဲ့ အရှိန်ကြောင့် သီးသွားပြီး အသက်ရူပါ ကြပ်သွားတယ်
“မောင်ညို…ကုန်းတော့ကွာ..ငါ လိုးချင်လာပြီး..” လေးဘက်ကုန်းပြီး ဖင်ကို အနောက်ကို ကော့ထားပေးပြီး လီးအဝင်ကို စောင့်ရတာ ကြာလိုက်တာဗျာ… “လုပ်တော့လေဗျာ…..” “မင်း..ခံချင်နေပြီးလား….ငါ လိုးပြီးနော် ” ဗြစ်…ဗြစ်……ဘွတ်…. အား…..သေပါပြီးဗျ…..နာတယ်… ခဏလေး…မောင်ညို……..စီးကြပ်နေတာဘဲကွာ လီးကြီးကို တရစ်ခြင်း…အဆုံးထိ ထိုးသွားပြီး နို့သီးခေါင်း ကိုချေလိုက် လည်ဂုတ်လေးကို နမ်းပေးပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း ညှောင့်ပေးနေတာ အရမ်းကောင်းလာပြီးဗျာ… “ကိုကြီးဖိုးထူး… ကြမ်းကြမ်းလေး လိုးတော့ဗျာ…”
“မင်း.. ကောင်းလာပြီးလား…ငါ ကြမ်းပြီးနော်” ဘွတ်…ဘွတ်…..ဘတ်….ဘတ်… အား…ရှိး…..အ….အ ကောင်းတာကွာ…..ကော့ပေး…ကော့ပေး……အား….အ… လူပျိုပေါက် တစ်ယောက်ရဲ့ နွားသိုးကြိုးပြတ် လိုးချက်တွေက ကျနော်အတွက် နတ်စည်းစိမ်းတွေပေါ့ဗျာ …. “မောင်ညို…..ကောင်းလား…..အား…. “ကောင်းတယ်…အရမ်းကောင်းတယ်… လိုးပေး…ကြမ်းကြမ်းလေး ” အား….အ…..အွတ်…… ပြီးပြီး…မောင်ညို…ကော့ထားပေး…..အား…အီး….
အချက်နှစ်ဆယ်လောက် တဘုန်းဘုန်း လိုးထည့် စောင်ထည့် ပြီး လရည်နွေးနွေးတွေကို ဖင်ထဲ ပန်းထည့်ပြီး မောဟိုက်သံကြီးနဲ့ “မောင်ညို….ကောင်းတာကွာ မင်းကို ငါညီကလဲ လိုးချင်နေတာကွ” “ကိုထွန်း ကလား” “အေးလေ…မင်း ခံချင်သေးလား” “သူက ဘယ်မှာလဲ မရှိဘဲနဲ့…..” “နောက်နေ့ ငါခေါ်လာခဲ့မယ် မင်းကို ငါတို့ညီကို ဝိုင်းလိုးပေးမယ်” နောက်တစ်နေ့…….. (တို့လယ်တော… မှာ နောက်တစ်နေ့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ဦးမှာလဲ)
Previous ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိပါတယ်